BEERTA BALSAM: SIFOOYINKA BEERAHA IYO DARYEELKA DHIRTA - KU DHALIDA BY GOOYN
Ugu Weyn Ee Ku dhalida by gooyn
Sida loo koro balsamines beerta
Balsam - ubax beerta ah, kaas oo ah warshad ubax ah, hoos u fiican u dulqaadan. Balsam wuxuu leeyahay stem toosan oo toosan, koraya ilaa 50 cm, caleemaha oval ilaa 12 cm dherer. Balsam waa wax fiican in lagu abuuro quruxda hooska beerta. Waxaad ku kori kartaa ubax beerta ubaxa ah ee ku taal goobta, iyo guriga oo ku yaal daaqadaha. Balsamooyinka ugu badan ee balsamku jecel yihiin inay dibadda dibadda joogaan, bilawga xilliga qaboobaha waxay u baahan yihiin in lagu beddelo dheriyo oo lagu rido qol.
Beerta beerta beerta ee dhul beereedka
Waa suurtogal in la beero ubax beerta leh bilawga ugu dambeeya kuleylka. Haddii ka dib marka loo wareejiyo dhirta wadada dhinaceeda, waxay u badan tahay in ay dhimanayaan. Beerto waxaa lagu sameeyaa inta badan abuurka, inkastoo, haddii aysan jirin rabitaan ah in la sugo, waxaad iibsan kartaa ubaxyo hore u koray.
Waa muhiim! Waxaa lagula talinayaa in ubax lagu beero dheriga, kadibna kaliya ayaa lagu beeray dibedda.
Wixii beerto, qodo godadka horay iyo ku dar compost iyo bacriminta iyaga. Si geedo si sahlan uga soo bixi karaan dheryihii, waa horay loo waraabiyey. Ubax waa in lagu beeray isla qoto dheer oo uu ku koray dheriga, meesha haray waa in la buuxiyaa substrate oo si wanaagsan loo riixo. Wixii ubaxa si aad u bilowdo, waxay u baahan tahay si fiican loo waraabiyo iyo furo ciidda.
Nalalka iyo heerkulka
Balsam waxay u baahan tahay qorraxda aan tooska ahayn, inta lagu guda jiro maalmaha qoraxda kulul ee ubaxa waa inay noqdaan kuwo pritenyat ah. Haddii ay muddo dheer ku sii socoto saameynta nalalka tooska ah ee dhalaalaya, ka dibna qoyaanku wuxuu ka soo baxayaa geedka, waxa uu ka dheregsanaan doonaa ur xun iyo way engegi doontaa. Balsam ayaa ugu wanaagsan ee lagu beeray galbeedka ama dhinaca bari ee goobta. Xilliga xagaaga, marka ubaxu dibedda u baxo, heerkulka ugu fiican wuxuu noqon doonaa qiyaastii 21 ° C, xilliga qaboobaha, marka ubaxa la geliyo qolka, heerkulku waa inuusan hoos udhicin 13 ° C.
Waa maxay dhulka
Balsam, gaar ahaan haddii ay ku koraan gudaha gudaha, waxay u baahan yihiin ciidda nafaqada, dabacsan, nafaqo leh. Cunto dheellitiran ee nafaqooyinka ee carrada waxay horseedi doontaa korodhka korriinka ee cagaarka, taas oo ah wax xun oo ubax ah. Xayawaan aad u dabacsan ayaa sidoo kale ma keeni doono faa'iido, ubax ma awoodi doonto inay si adag u xoojiso. Best ugu fiican ciidda yar acidic. Halabuurka carrada waxaa lagu dari karaa qaybo isku mid ah compost, humus, perlite iyo sod dhul. Waxaad sidoo kale isku qasin kartaa ciid iyo peat laba qaybood oo ah dhul caleen ah, tani waxay noqon doontaa beddel ku filan.
Sida loo abuuro ubax
Balsam waa ubax beer, iyo daryeel ayaa loo baahan yahay. Xilliga xagaaga, waxaad dhali kartaa balsam ciidda furan. Beerto waa lagama maarmaan maaha wax ka horeyntii badhtamaha Juun, haddii kale aan weli warshad lagu waraabiyo ayaa dhiman doonta.
Waa muhiim! Goobta cagaarka waa inay ahaataa mid daboolan.
Xayeysiintu waxay si fiican ugu habboon tahay xaaladaha cusub iyo sidoo kale dalagyada wanaagsan, laga bilaabo Juun iyo dhamaadka bisha Sebtembar. Xilliga dayrta, ubaxa waa in la qodaa oo la diyaariyaa gooynta qashinka ah ee xididka.
Xilliga jiilaalka, balsamku wuxuu u baahan yahay iftiin dheeraad ah, maxaa yeelay ma laha waqti nasasho. Haddii aad si fiican u daryeesho, dhirta ayaa ku farxi doonta ubaxiisa.
Ma taqaanaa? Waxaa jira noocyo kala duwan oo ah balsam oo kaliya ubaxyada xagaaga.
Labaadna balsam ku sifee labo siyood:
Iyadoo caawimaadda abuurka. Si arrintan loo sameeyo, dhulka ku shub dheriga, u habee oo u qoyso. Ku rid abuurka fogaan ah 2 cm midba midka kale, kula saydhaa dhulka. Daboolka ku dabool bac caag ah, ku rid meel bannaan. Marka geedo soo baxaan iyo Bloom, ku beerista beerta. Geedo wanaagsan ayaa kori doona 4 bilood.
Qof kastaa wuu ogyahay in balsam uu yahay beer la taaban karo. Si ay u koraan sida nin qurxoon, waxaad isticmaali kartaa gooyn. Kaliya ubaxyada dilka ah ayaa ku faafay by gooyn. Dooro caleemaha dhalinyarada, xoog leh oo xoog leh. Goynta, jarida waa inay noqotaa qiyaastii 7 cm. Dhirta jarjariga ah ee dheriga, ciidda ku hareeraysan dhulka. Dheriga ku rid meel diiran oo ku shub ubaxa. Waxaad ku dabooli kartaa baxsiga koobbi caag ah si aad u abuurto saameyn koronto ah.
Ubaxa Balsam waa sahlan tahay inuu koro, waana inaadan wax dhib ah ka qabin sidii aad u daryeeli lahayd.
Qoyaan iyo dhirta waraabinta
Dadku waxay leeyihiin magac balaadhan oo xiiso leh - Roly qoyan. Magacani waxaa loo siiyay jacaylka biyo badan iyo qoyaan badan. Laakiin aadan kaliya ma buuxin kartaa ubaxa, sababta oo ah this, waxaad keeni kartaa horumarinta kallana xidid. Iyadoo waraabinta saxda ah ee balsam ah, ciidda ma noqon doonaa kuwo qalalan, waxay had iyo jeer ku jiri doonaa qoyan. Xilliga qaboobaha, xaddiga biyaha waa in la dhimo. Biyaha waa inay jilicsan yihiin.
Ma taqaanaa? Si biyuhu u noqdaan kuwo jilicsan, waxay u baahan tahay in la isticmaalo dhowr maalmood.
Markaad u baahato inaad quudiso balsam
Ubaxa sida balsam, kaas oo ku koraya aagga beerta, waxay u baahan yihiin quudin fiican xilliga ubaxyada iyo koritaanka. Way fiicantahay in la bacrimiyo ubax muddadii laga bilaabo Abriil ilaa Nofembar, xilliga qaboobaha, maaha inaad bacrimiso dhamaanteed, ama si aad ah u yareeyo tirada bacriminta. Waxaa lagu talinayaa in lagu quudiyo ubaxa 2 asbuuc walba.
Xilliga jiilaalka dheer, balsam ayaa si weyn u koraa, sidaas darteed waa lagama maarmaan in la gooyo u dhow guga, tegaayo kaliya dhererka dhererka caleemaha, ka dibna ubaxa kicinaysaa koritaanka caleemaha cusub, xoog leh. Haddii ubax uu soo saaro badan oo caleemo, ka dibna ubaxu wuxuu noqon doonaa mid cajiib ah. Inta lagu jiro sanadka, fiiri sida balsam koraayo, daryeelka ubaxku wuxuu u ogolaanayaa manjooyin ku dhufasho iyo laamo daciif ah, taas oo ay ugu wacan tahay dhalmo wanaagsan oo ubax ah.
Xeerarka Qalabka Balsam
Waqtiga ugu fiicani ee loo yaqaan 'balsam transplantation' waa guga. Laakiin haddii uu jiro baahi sidaasi ah, markaa waxaad ku beddeli kartaa ubaxa xagaaga. Waa muhiim in la fahmo in ubaxa wanaagsan uu ku xiran yahay cabbirka dheriga. Inta lagu jiro bedelida waxaad u baahan tahay inaad ka takhalusto dhirta qadiimka ah, si ay dhalinyaradu u helaan fursad ay koraan. Geedka dhalinyaradu wuxuu u baahan yahay in la soo celiyo sanad walba. Haddii ubaxu hore u yahay qof weyn (oo aan ka weyneyn 3 sano), markaa waa la cusbooneysiin karaa (isagoo xidhan gooynaya apical) ama la beddelo.
Si aad u korto naas naftaada, marka hore waxaad u baahan tahay inaad diyaariso geedo. Diyaarso ciidda lagama maarmaanka ah, ku dar fungicide in ay, taas oo ka ilaalin doona dhirta ka muuqata of fangaska waxyeello.
Halkee laga helaa iyo sida loo koro miraha
Dhirta abuurka waxay ka bilaabataa iibsashada miraha. Ka hor intaan wax beeran, waxay u baahan yihiin in la nadiifiyo. Si arrintan loo sameeyo, diyaariso xaraar diirran oo ah kiniinka potassium iyo ku shub 10 daqiiqo. Ka dibna daadi xalka, iyo buuxi abuurka biyo nadiif ah oo diiran. Ha u istaagaan maalin. Ka dib markii in, ku beeraan ubaxa ubaxa carrada qoyan oo si khafiif ah ula saydhaa dhulka, abuuro aqalka dhirta lagu koriyo. Saddex usbuuc ka dib, caleemaha ugu horreeya ayaa soo baxaya.
Heerkulka raaxada ee biqilka abuurka + 23 ° C. Marka geedo u muuqdaan, waxaad ka saari kartaa aqalka dhirta lagu koriyo oo lagu yareeyo heerkulka dhowr darajo. Bixinta hawo wanaagsan oo geedo ah, iyo sidoo kale iftiin dheeraad ah. U hubso inaad raacdo waraabinta, ma u oggolaan kartid inay kor u kacaan. Marka ay jiraan 5-6 qof oo caleemo qaangaar ah, waxaad ku soo celin kartaa geedo ah dheriyo kala duwan.
Goynta balsamic beerta
Waxa kale oo jira habka jarista taranka, habkani waxaa loo isticmaalaa marar badan sababtoo ah waa waxtar badan. Wixii rooting gooynta balsam waxay u baahan tahay in ay leexiyaan duulimaadka ugu sareeya ee ku yimaada meesha ugu dambaysa. Ka dib markaa, jirida waa in lagu dhejiyaa galaas biyo ama ciid qoyan, halkaas oo ubaxa uu xidid ku dhici karo. 3 asbuuc ka dib, xididdada ayaa si wanaagsan loo dhisi doonaa waxayna ku haboon tahay inay ku tallaalaan. Qaab kale oo ka mid ah sida balsam ah sida dhirta - jaraan jirida dayrta. Marka xigta, waxaad u baahan tahay in aad nadiifiso asliga ah caleemaha oo ku rid galaas leh substrate. Ku dabool bac caag ah, si fiican u waraabiyo. Maalmo yar kadib waxaad ka saari kartaa xirmada. Marka xigta, waa inaad waraabisaa biiyaha 2-dii toddobaadba mar.
Hadda waxaad taqaanaa balsam, waana inaadan wax dhibaato ah ku qabin daryeelka iyo taranta ubaxkan.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Ku dhalida by gooyn 2019